Hevitra MPANOHARIANA | Toekarena | 2
Tanàna kanto? Tsena mendrika? Nofinofy sy revin-gadra?
2016-01-23 @ 21:46 in Toekarena
Zavatra nahaliana ahy hatry ny fahazaza ny politika. Mety hahagaga anao angamba izany teny izany hoe fahazaza nefa dia izay no marina. Tamin'izaho folo taona no efa nentin'ny raiko hanatrika fiantsoan'ny Monima (antoko mpanohitra ao anatin'ny Mandatehezana Miaro ny Tolom-Piavotana) ny vahoakan'Antananarivo tao amin'ny Coum 67ha. Tamin'izany fotoana izany no nahalany depiote teto Antananarivo an'i Monja Jaona, izay indrisy moa fa nanenjika Merina taty aoriana. Antananarivo hany mijoro eo anatrehan'ny fitondrana foibe tamin'izany fotoana izany. Ilazako aminao izany fa novolavolaina tao anatin'ny fikatrohana politika ivelan'ny antoko politika aho ary efa nanana ny hevitro manokana ihany koa. Dia marihina eto fa hatramin'izay ka hatramin'izao aho dia tsy mbola nisoratra anarana tamin'ny antoko politika na fikambanana politika na iza na iza. Tsy adinoina ihany koa ny nitondrana ahy teny amin'ny Catalanes, nefa tsy azo itondrana zaza hoe ny famangiana manjò eo amin'ny fomba malagasy, tamin'ny nahafatesan'ny kolonely Ratsimandrava filoham-panjakana tamin'izany fotoana izany... Vao efa-taona monja aho tamin'izany fotoana izany.
Henjana dia henjana sy tsy mbola zakan'ny besinimaro amin'izao fotoana izao ny fihevitra sy fomba fiasa ara-politikako raha izay no azo ilazana azy. Tsy misy mahafapo ahy ihany koa ireo antoko politika rehetra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa izay manakaiky indrindra amin'ny fototra na firehan-kevitro no nofidiako na be aza ny tsy itovizako amin-dry zareo. Raha heverina tsotra dia manana firehana henja-piheverana aho, revolisionera fa tsy mpisolelaka mamitaka mpitondra fanjakana. Tsy hisy hanaiky izany hoe esorina eto Antananarivo renivohitra ny tsena ankalamanjana rehetra izany, na isa-potoana iray ao anatin'ny herinandro aza, nefa dia izay no tadiaviko (ohatra ny tsena alakamisy eo Mahamasina).
Raha amin'ny zavamisy eto Antananarivo dia ataoko fa efa miharihary aminao ny fanohanako ny asam-panadiovana amin'izao fotoana izao. Sarotra dia sarotra io sady mandeha ambony hoditr'akondro ihany koa. Ny nandrafetana ny tanàna mihitsy no olana fototra ary amiko, ohatra, dia tokony nosaziana, na iza na iza, izay nanome alalana tamin'ny fananganana ireo trano fivarotana eo Behoririka amin'ilay antsoina hoe Gauloise taloha eo. Ety dia ety loatra ny lalan'ny mpandeha an-tongotra, na navela hanao ny danin'ny kibony ny nanangana ny trano. Tokony nohalalahana ny lalana na ho an'ny fiara na ho an'ny mpandeha an-tongotra. Tsy tokony ho fiatoana fa fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka ihany koa eo.
Ireo tsena namboarina rehetra teto Antananarivo ihany koa, amiko dia tsy misy mety fa toy ny manenjika hampiditra isan'olona amin'ny toerana kely velarana, manome vahana ny mpangaro-paosy avokoa. Rafitra toy ny mitaiza ny olona hirona amin'ny kivarobarotra fa tsy mametraka ilay olona ho tena mpivarotra mandoa ny patanty sy ireo hetra sy haba rehetra tokony aloa fa tsy mihevi-tena ho madinika tsy mahaloa izany hetra izany. Tsy mety ihany koa ny toe-tsain'ny mpivarotra mamela ny hafa hivarobarotra eo anoloan'ny fandraharahana ataony, izay miteraka fibahambahanana avokoa, mety hahatezitra anao angamba izany fa hoe tsy misy fitserana ny mahaolona mihitsy ve? Amiko dia misy sandany izany fipetrahana sy fiasana eto amin'ny renivohitra izany. Fa raha ny fampidiran-ketra eto Antananarivo aza tsy voafehy dia ahoana ny ifehezana ny fampidiran-ketra manerana an'i Madagasikara? Tsy mahagaga raha manjaka ny kolikoly. Ny endrika tsena ho an'ny daholobe misy eto Antananarivo manakaiky indrindra amin'izay heveriko dia io Pavillons Analakely io, nefa io aza mbola tery loatra ny lalan'ny mpiantsena fa tokony hahatafiditra fiara na dia tsy azon'ny fiara aleha aza, izany hoe amin'ny ankapobeny dia lalana manana sakany efatra metatra raha kely indrindra fa ahafahan'ny fiarabe mpanadio tsena amin'ny alalan'ny fanasana azy amin'ny rano izany. Tokony hanintona olona indrindra ihany koa, tahaka ny taloha ny endrika tsena feno arcades na karazana lalana sy vavahadin-tsena iray mananan karazan'entana manokana amidy.
Arcades natao ho lalan'ny mpandeha an-tongotra irery ihany, tsy azon'ny fitaovana rehetra misy kodiarana andehanana afa-tsy amin'ny sasakalina ka hatramin'ny efatra maraina, fotoana ampidirana ny entana amidy ao an-tsena, soritana fa tafiditra amin'ny fampidirana na famoahana entana eto ihany koa ny fanadiovana sy fanangonana ny fako aterak'izany famindran'entana izany. Voafaritra ao anatin'ny fitaovana misy kodiarana avokoa ireo mandeha motera na voizin-tongotra na voizin-tanana, na apetaka amin'ny kiraro, fa ny hany karazana fitaovana misy kodiarana tokana azo entina dia ireo fitaovan'ny tsena, atosi-tanana, itondran'ny mpiantsena ny entany raisina sy ajanona eo am-bavahady efa misy itoerany manokana. Ireny ihany koa no itondran'ny mpivarotra ny entana amidiny rehefa tsy nahatratra ny ora fampidiran'entambarotra izy. Ny mpivarotra rehetra dia manana velaram-pivarotana sivy metatra tora-droa raha kely indrindra, tsy misy mpivarotra entana mijorojoro an-dalan'ny miantsena miaraka amin'ny zavatra amidiny fa heverina avy hatrany ho mpijirika sy jiolahy izay manao izany ka omena sazy henjana dia henjana. Ny tsena dia misokatra manomboka amin'ny dimy sy sasany maraina - izany dia noho ny sakafo maraina indrindra indrindra - ary ny fikatonan'ny tsena aloha indrindra azo ekena ankoatra ny fotoana manokana dia amin'ny valo ora alina, ny fisokafana farany azo ekena kosa dia amin'ny sivy sy sasany maraina. Azon'ny hafa atao kosa ny mivarotra hatramin'ny sasakalina. Fanadiovana faobe ny tsena ataon'ny mpitantana kosa manomboka amin'ny telo ka hatramin'ny dimy maraina, fandraofana ireo fako nangonin'ny mpivarotra tamin'ny fampidirana entana sy fanasana ny tsena iray manontolo.
Tsy azo leferina ny halatra sy ny fandrobana, ny fanendahana sy ny haro-paosy ao an-tsena ka hatramin'ny 50 metatra manodidina ny tsena fa heverina ho fananihana lapam-panjakana ahazoana ny sazy ambony indrindra, tahaka ny tamin'ny andron'ny Ombalahibemaso. Tsotra ny antony: iankinan'ny ain'ny mpiantsena sy ny mpivarotra, ny aim-bahoaka sy ny fandraharahana ary ny toekarena iray manontolo ny tsena ka miteraka fatiantoka goavana na ho an'ny tsirairay na ho an'ny tanàna sy ny firenena ny fanohintohinana ny fampandehanana ny tsena. Amin'ireo fitantarana sy fanazavana rehetra ireo dia sainina fa tsy kivarobarotra no atao fa tena fandraharahana mihitsy, tsy asan'olon-tokana fa olona maro mifandimby sy mifampita raharaha, tsy maintsy misy ny famoronan'asa. Efa lava loatra sahady nefa zavatra hafa mihitsy no saiky hosoratana fa dia tsakotsakoy aloha izay!
Jentilisa 23 janoary 2016
Ny atolotrao sy ny safidiko
2013-10-20 @ 22:26 in Toekarena
Miditra sahady amin'ny herinandro farany amin'ny fampielezan-kevitra isika eto Madagasikara. Toa hoe ho ela ihany vao ho tonga ilay androm-pifidianana sy ny fahafantarana ny vokatry ny safidim-bahoaka. Mitaintaina ny rehetra efa manana ny safidiny fa mbola am-pandresen-dahatra ireo feno fisalasalana sy efa kivin'ny krizy nateraky ny tetezamitatra kosa ireo komity mpanohana sy ny kandida tsirairay avy. Eto vao tena tolona am-batolampy, araka ny fiteny malagasy, ka izay tsy mahatandrina sy mibolisatra no vaky loha. Eto no lala-mahitsy farany, araka ny fiteny frantsay, saingy mety tsy fantatry ny maro amin'ny Malagasy ny tohiny, fa tsy vahiny kosa amin'ireo tia hazakaza-tsoavaly mpanao "trot", ka mampihintsana avy hatrany ny fanaovana fahadisoam-pamindra mihoatra ny in-dimy.
Tsy miresaka loatra any amin'ny kandida hafa any aho fa mivantana kosa any amin'ny kandida tohanako sy ny komity mpanohana azy, ny laharana faha-33, amin'izao ankatoky ny fifidianana ho filoham-pirenena izao. Tsorina fa tsy any amin'ny programan'asanao na ny hevitra sy ny fandresen-dahatra avy aminao no nahatonga ny safidiko any aminao fa noho ianao napetraka tsotra izao ho sariohatry (fr: symbole) ny fiandrianam-pirenena manoloana ny fanindriana ataon'ny firaisamonina iraisampirenena, indrindra fa ny manoloana ny firenena nanjanaka ny Tanindrazana teo aloha dia ny firenena frantsay izany. Tsy sanatria fankahalana vahiny izany fa fijoroana ho tsy manaiky hoambaniana sy tsy manaiky hohitsakitsahana kosa. Fa raha lazaina ho fankahalana ny fiheverana hoe tsy zanataninao, firenena frantsay, intsony aho ka manan-tsafidy amin'izay firenena tiako iaraha-miasa sy ny fomba iarahako miasa amin'ireo te-hiasa miaraka amin'ny fireneko sady mampandroso sy mampivoatra ny olom-pirenena malagasy dia tsy maninona fa raiso hoe mankahala Frantsay aho. Tsy ekeko ny fanjakazakam-bahiny eto amin'ny tanindrazako ka antony lehibe izany hisafidianako ilay napetraka ho sariohatry ny fiandrianam-pirenena nefa tsy asiana fankahalana vahiny.
Misy ireo kandida te-hametraka tombondahiny manokana ho an'ny firenena sy vondron'olona vahiny mpanitsakitsaka ny zon'ny Malagasy, efa zatra ny mitavana maimai-poana ny harem-pirenena sy mividy mora toa tsy manome lanja ny hatsembohana sy ny ron-doha malagasy, tsy mankany amin'ireny velively ny safidiko. Misy ihany koa ireo mpanandratra ny fiandrianam-pirenena sy mihevitra fa afa-miolonolona samirery ny Malagasy, andron'ny fanatontoloana anefa izao ka mety ho famitahan-tena ihany ny fiheverana tahaka izany. Tsy tsara ny miakin-doha ary tsy tsara ihany koa ny miolonolona satria mbola tsy mahavita tena samirery ka ilaina ny miara-miasa amin'ny vahiny, ka samy mahazo tombontsoa amin'izany fiaraha-miasa izany fa tsy mahatsiaro ho voambaka tanteraka ohatra. Antony iray hafa hametrahako ny safidiko amin'ny #33 ihany koa izany. Tsy reko ho efa namaly ny momba ireo ianao izay kandida hofidiako saingy izay no apetrako an-tsorokao ankoatra izay efa nahatonga ny maro ho lasa mpanohana anao indray: ny hampody ny sesintany politika rehetra. Ianao irery no nanitrikitrika io teboka farany io.
Hofidiana ianao satria toherinao ny fanonganam-panjakana miaramila sy sivily. Hasehon'ireo mpanohitra ny fanonganam-panjakana rehetra ny safidiny ho aminao, hitambaran'ny vato ho goavana sy tsy azo hozongozonina, ka na misy aza ireo mitovitovy firehana aminao dia ny fanohanana anao no fanainga tsara indrindra ho famerenana ny hasina very taona vitsivitsy izao.
Tsy mbola ilaina loatra araka ny fiheverako ny manao fampanantenana hafa fa ireny indray aza no ho teboka hafa hamelezana anao rejefa kelikely eo. Avelao ireo mpanotrona no tena hamboraka ny ao am-pony fa amin'ny fihodinana faharoa ianao vao manao ny misimisy kokoa, raha sanatria tsy maintsy idirana ihany izany fihodinana faharoa izany; hevitro manokana iny.
Araraoty ny hamadihana ny safidin'ireo mpanohana ny tolona laoranjy lasa kivy tamin'ny fanomezana tombontsoa tafahoatra ny miaramila sy ny zandary, ka lasa tambin-karama ny efa hanakaramana azy ireo hatrizay. Lazao azy fa na ilay mpitarika ny tolona tamin'izany aza lasa nangalatra ny lokon'ny antoko naongany sy ny laharana misy azy ao amin'ny bileta tokana tamin'ny alalan'ny fametrahana solon-kandida, ka ianao koa aza manaiky tsy mifidy fa fidio ny tohanan'ilay ankolafy naongana fa aza mifidy intsony ny mpaka tahaka. Asehoy amin'ny alalan'ny safidinao fa tsy ny miaramila sy ny zandary ihany no olombelona eto amin'ity firenena ity.
Efa lavalava sahady izay ny voasoratro sady sopapa vitsy ihany io ry kandida hofidiako ( #33 )� fa anjaranao no mandray na tsia, anjaranao ny mandamina. Anjara birikiko amin'ny fanohanana anao ihany ireo. Anterina indray fa tsy mbola ny teninao loatra no anohanan'ny maro anao, ka tsy mila be teny ankoatra izay tena hotanterahinao ianao, fa napetrakay ho sariohatry ny fanoherana ny fanonganam-panjakana sy ny mpanongam-panjakana ianao. Sariohatry ny fanarenana an'i Madagasikara indray ianao, ary tsy niray petsapetsa tamin'ireo namotika ny firenena. Sariohatry ny fijery mahitsy sy mitandro ny rariny ianao ka tsy manaiky ny zara vilana manome tombony manokana ny ao amin'ny tafika. Raha voatandrinao izay faniriana anatin'ireo lasa mpanohana anao ireo dia ho heni-boninahitra izy ireo ka tsy ho menatra amin'ny safidy nataony.
21 oktobra 2013
Bitika raha mba miteny!
2012-10-03 @ 19:47 in Toekarena
Efa ady sy tolona vao mba mahasoratra! Asa! efa tsy liana intsony amin'ny famoahana izay hita sy re ve? tsia kosa angamba fa ny fakam-panahy mety mahazo dia variana mamaky izay soratan'ny hafa fotsiny. Na mety ilay efijery (fafana hoy ny sasany) no kely loatra na ny kitendrin'ny finday no tsy mampazoto? Tsy fantatra intsony fa mbetika te-hanoratra nefa tsy misy lahatsoratra mivoaka akory avy eo. Ity soratako ity izao efa herinandro (alarobia) no nangidihidy tao an-dohako tao fa izao angamba vao tontosa. Tiana holazaina izany fa tsy hoe manoratra ny hafa dia manoratra koa ny tena fa ilay lohahevitra mihitsy no mamaivay any anaty any fa "tahaka ny tsy mba misy mpiresaka andavanandro" na izany aza! Diso tanteraka anefa izany fiheverana izany fa ny fampahalalam-baovao vaventy mihitsy no toa fady ve sa voarara tsy hiresaka azy ity? Aza gaga ianao noho izany raha mbola haba (fehin-tanana) "Power Balance" ihany no ifantohana etoana.
Raha manoratra ity vokatra malaza sy manangom-bola fatratra eto amin'ny firenena ity ny tena tsy hamerina intsony izay efa nolazain'ny hafa. Izao fotsiny no mahavariana. Nazoto sy narisika nandritra ny braderie tetsy Mahamasina ry zareo ary anisan'ny nahazo mpividy be indrindra sy nilaharana aza teo amin'ny tranoheva nivarotany. Ny mpanombana no nilaza fa raha vitsy indrindra dia 1000 ny isan'ny olona nividy hafa isaky ny tapak'andro izany hoe 2000 isan'andro, averina indray hoe raha vitsy indrindra izany. Ny vidin'ny haba iray, araka ny takelaby fanaovana dokambarotra dia Ar30000 fa namidy Ar25000 tao amin'ny "varoboba", nolazaina ihany koa fa averina ny vidim-pidirana raha mividy ilay haba ao anatiny ianao izany hoe Ar24000 ny vidiny nandritra ity "varoboba" ity. Nisy ihany koa ny filazana fa raha mividy iray dia omena iray fanampiny maimaipoana. Andro iray noho izany raha kely indrindra ny vola azon'ny mpivarotra ity marika haba ity dia mitentina Ar 48.000.000 any ho any. Nandritra ny dimy andro no nanaovana ny varoboba ka heverina ho Ar 240.000.000 na 1,2 miliara farantsa malagasy raha kely indrindra. Koa inona no iraharahiany izay tabatabanao raha mahazo izany vola izany izy mandritra ny "varoboba" tao Mahamasina ry zareo? Ianao indray ary no ahiana ho fatifaty foana tsy amin'antony na voasambotra ho mpanakorontana raha hiseho hitabataba amin'izany eny ankalamanjana eny, izay no nahatonga ilay lohateny hoe: Bitika raha mba miteny!
Variana ny tena manao hoe tsy nampaninona anie raha mivarotra haba tahaka ny zavatra rehetra ry zareo ary tsy misy antony hanenjehana azy raha resaka lamaody fotsiny no ividianan'ny olona. Hafa kosa ny fandehany, ary ahiako ho izay no safidin'ny mpaninjara azy, raha lazaina fa manana hery mampanao na mahavita izatsy na izaroa izy... averiko indray "ahiako" satria tsy maharaka izay fanazavana lavabe nataony ampahibemaso aho. Fa inona no mahamaika handafo azy haingana dia haingana? sa mila vola maika? Ny resaka ataon'ny olona an-jorony, izany hoe tsy ampitain'ny fampahalalam-baovao be mpanaraka aminao velively noho ny vola mifafy angamba, dia matetika manao hoe "tsy hitako izay fiantraikany tamiko!" satria niandry fahagagana ry zareo. Raha nisy ny fiandrasana fahagagana dia nisy noho izany ny nampanantena tao ambadimbadika tao. Eo no tena misy ny hafetsena... Mody tsara fanahy amin'ny hoe raha mividy iray dia omena iray maimaipoana! fa izao: tsy mety ampindrampindramina iny haba azonao iny fa ho anao ihany, simba ny "heriny" raha vao hoe anaovako ilay izy androany dia ny vadiko indray na ny zandriko indray no manao azy rahampitso. Noho izany tokony hanana tsirairay ny ao an-trano hampety ny tantana. Raha maro an-trano dia bebe ihany koa ny fandaniana hividianana azy. Fanintonana ataony, araka ny tsilian-tsofina, ny hoe manatsara kokoa ny fahasalamana ny fanaovana azy. Roboka ny besinimaro fa mba hoe tsy ampy sakafo ny tena ka aleo mihafy mividy sitrany ahay! saingy ilay besinimaro tsy mahalala mikaroka amin'ny aterineto sy tsy mba misy mpampahafantatra moa ireo... na resy lahatra tanteraka fa fanosoram-potaka ihany izay voalazan'ny sasany. Akory moa atao fa zakao ny anao rehefa nolazaina saingy :"Misy Mihaaaaiinoo?"
Fa dia miandry fijoroana vavolombelona amin'ireo izay nahazo fahasoavana avy amin'ny fanaovana azy ity izany izahay e! Saingy izao manko, ho be ny ho menatra hoe izaho dia voambaka, rehefa tsy nisy fiantraikany tamin'ilay olona ilay izy fa ny vola teo am-pelantanana no nihena aloha! Tsy afa-manoro hevitra loatra satria tsy niditra tamin'ny fividianana azy ity ny tena ary nanazava tamin'ny olona izay efa nitranga tany Aostralia raha misy manontany. Hoy fotsiny ny eritreritro hoe raha izaho ilay voambaka nefa tsy mety mandray ny fitarainako izay atoniko dia mihevitra aho fa fanakanana ahy tsy hilaza na hamoaka ny tsapako izay ary karazana fanohintohinana ny fahalalahana miteny amin'ny fomba ankolaka (noho ny herin'ny vola indrindra indrindra) dia lasa aho manao trakitra mametaka ny momba ity eny amin'ny andrin-jiro manerana ny tanàna. Fa na eto Antananarivo ihany aza no amoahako azy dia hiely vetivety tsy amin'ny alalan'ny famoaham-baovao be mpihaino na be mpanaraka ny momba ity marika haba ity. Saingy noho izaho tsy voambaka ary tsy nividy azy dia kamo aho ny hanaparitaka izany trakitra izany eny rehetra eny fa dia ny famoahana ny hevitro eto ihany no ataoko. Eto vao tsapako fa na "Bitika raha mba miteny!" aza ny tena dia ilaina ihany ny fananana sehatra tahaka itony ifampizaran-kevitra ary tena zava-dehibe sy tokony tandrovana mafy ny fiarovana ny sehatra tahaka itony. Misy ny sivana ara-toekarena, noho ny vola azo avy amin'ny dokambarotra, amin'izao fotoana izao fa tena sarobidy kokoa noho izany ny fahalalahako manoratra sy mampita aminareo ny tsinapa sy ny eritreritra.
Jentilisa 3 oktobra 2012
Ireny fotsiny ve?
2011-09-29 @ 23:15 in Toekarena
Ninia tsy niteny omaly raha nahita ny vohikalan'ny heverina ho mpanohana ny filoha voaongana teo aloha "nisy nisovoka" ny omalin'ny fotoana hahatongavan'ny filohan'ny FAT. Raha nahita iny aho dia efa mampiomana sahady fa hisy fahatapahana tahaka iny hatrany io vohikala io rehefa ho avy ny fotoan-dehibe hitranga eto Madagasikara. Manana ahiahy aho noho izany fa misy "mpamadika" ao anatin'io vohikala "ofisialy" io.
Dia niandry amin'izay ary ny tena hahita izay fandehan'ny fitsenana natao makotroka ka renay izay tsy mpanara-baovao amin'ny fampitam-baovao mahazatra loatra intsony aza. Tsy handeha hanampy ny isan'ny olona kosa anefa fa izay mampita aty amin'ny aterineto ihany no jerena. Dia niandry ny sary avy amin'izay nazoto nitsena na voairaka hitsena noho ny asa ihany koa.
Olona tsy mety alaina sary manatrika hoe
Rere sy niely teto amin'ny aterineto ary nolazain'ny vaovao ihany koa ny fizarana vola sy ny fitaterana maimai-poana fa tsy dia misy idirako lalina ny amin'iny. Ny hitako kosa, raha ny sary hatrany no jerena dia vasoka raha miohatra ny tamin'ny 19 febroary ny hamaroan'ny olona tonga teny. Tsy vola kely anefa no lany tamin'ny fikarakarana iny fitsenana iny. Efa navela hiditra amin'ny fiantsonana izay tsy azo nidiran'ny mpanohana an-dRavalomanana ireo tonga, efa navela ho tonga tany avokoa ny fiara fitaterana an-drenivohitra na dia voarara mafy aza zany tamin'ny volana febroary fa ireny ny olona azony. Jereo ihany koa ny mpitandro ny filaminana fa tsy nihazona basy toa hanambana olona na nitondra baomba mandatsa-dranomaso, izany hoe efa tsy misy na inona na inona ahiana fa izay no tratra e! Na izany na tsy izany dia ny fifidianana ihany no tena ahafantarana izay tiam-bahoaka kokoa.
Indreto misy sary tsy nahazoana alalana nalaina avy tamin'ny vaovaon'ny tvplus izay azonao arahina manontolo an-tserasera ny vaovaony. Ny tsikaritra fotsiny androany dia tsy hitako nandeha ny vohikalan'ny matv.mg tamin'ny fotoana nitsidihako azy izao alina izao ary tsy nisy feo mihitsy kosa na dia nandeha ihany aza ny sary ny tao amin'ny http://www.moov.mg/matv/
Jentilisa 30 septambra 2011, amin'ny 01:20
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Manaraka»